Mr Tarsan” “Qaranimada Somaaliyeed waxaa ceeb iyo fadeexo ku ah in hal shir ay lix madaxeyne oo Somaali ah ay isugu tagto,” – Kismaayo24 News Agency
by admin 18th July 2018 0122
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir hadana ah lataliyaha Madaxtooyada dhanka Siyaasadda Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa ku tilmaamay fadeexad iyo ceeb in Lix madaxweyne hal shir isugu wada tagaan hal dhinacna ka soo wada jeestaan.
Wuxuu Mr Tarsan ayaa si weyn u weeraray madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada,isagoona shacabka Soomaaliyeed weydiiyay magac kale oo aan ahayn madaxweyne oo loogu yeeri karo madaxda maamul Gobolleedyada.
Halkaan Hoose ka Akhri Qoraalka uu soo dhigay Facebooka:-
“Qaranimada Somaaliyeed waxaa ceeb iyo fadeexo ku ah in hal shir ay lix madaxeyne oo Somaali ah ay isugu tagto oo ay ka soo wada horjestaan hal dhan. Lixda madaxweyne oo uu ka dhexeyo hal calan iyo hal dal, waa wax laga yaxyaxo.
Waxaan rabaa in aan shacabka Somaaliyeed weydiiyo in aan ka fekerno magac kale oon madaxweyne aheyn oo lagu qancinkaro madaxweyneyaash Dowlad Goboleedka ayada oon mansabkooda hoos loo dhigeyn, Qofkii keena magac lagu qancinkaro madaxda Dowlad Goboleedka waxuu ku guleysandoona abaal marin”.
Kulankii Wasiirada Federaalka iyo Madaxweynaha Puntland oo is afgarad la,aan kusoo idlaaday.
Akhriso: Warbixin Cusub oo Qaramada Midoobay ay ka soo saartay Xaalada Wadanka Soomaliya
FBI-da oo Dabagal ku haya Soomaali Mareykan weerar geysatay
admin 18th August 2016